ကျော်စိုးမိုး (နည်းပညာ): Viber Code မရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် Code စောင့်စရာမလို့တဲ့ Viber လာပါပြီ ကျော်စိုးမိုး (နည်းပညာ)
Viber Code မရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် Code စောင့်စရာမလို့တဲ့ Viber လာပါပြီ ဒီ Viber လေးကတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျာ သိပြီသာသူတွေ မပါဘူးနော်မသိသေးတဲ့ သူများအတွက် ပါ ။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ Viber ကိုပေးတဲ့ MPX ကအကိုတွေကိုလဲ Credit ပေးပါတယ် ။ဒီ Viber ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ တခြားဘက်က ဖုန်း ခေါ်လာတာကိုလဲ စောင့်စရာမလို့ပါဘူးတခါတည်း Auto Coad တွေဝင်ပြီလုပ်သွားတာပါ။Viber apk ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ http://www43.zippyshare.com/v/41327138/file.htmlဒေါင်းပြီ ရင် ဖုန်းမှာ install လုပ်ပါ လုပ်နေကြအတိုင်လေးပဲ ဖုန်းနံပါတ်ထည့် ပါ ပြီရင် Continue ကိုနိပ်လိုက်ပါ Coad ထည့်ရမယ့်နေရာရောက်ရင် သူဟာသူ Coad တွေထည့်ပြီလုပ်သွားလိမ့်မယ်လွယ်မှလွယ်နော် ဘယ်လောက်မှ မကြာဘူးနော် ။အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ။။။။။။။။။။။။။။။။။
Android ဖုန်းမှာဆော့ဖို့သရဲတွေကို ကားနဲ့ တိုက်ရမယ့် ဂိမ်း Download - Earn to Die.apk
myandroiddict ( အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ) အဘိဓါန်
myandroiddict ( အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ) အဘိဓါန် လေးဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်နော့် ဖုန်း android 2.3.3 နဲ့ တော့ တော်တော် ကို အဆင်ပြေပါတယ် ။ ...
Android ဖုန်း root လုပ်နည်းများ / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး Samsung Galaxy S5570 ကို Root လုပ်ပြီး မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း
( How to Root Samsung Galaxy S5570 And Install Myanmar font ) Share This Command တွေထဲမှာ root လုပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေ မေ...
ကိုယ်တိုင် တင်ချင်သူ အတွက် Window7တင်နည်း မြန်မာလိုစာအုပ်
၀င်းဒိုးတင်တာက မခက်ပါဘူး ကောင်းနေတဲ့ စက်ကို လုပ်ရင် ပိုပီးလွယ်သေးတယ် ပျက်နေရင်တော့ စာအုပ်ထဲက အတိုင်း အဆင့်ဆင့် အတူတူပါပဲ ပုံသေမမှတ်ဖို ...
ဖုန်းBattery တွေကို တာရှည်အသုံးပြုနိူင်ဖို့ အတွက်Battery Repair (Doctor Boost) For Android ဒီ Apk လေးကို အသုံးပြု ခြင်အားဖြင့် ဖုန်းရဲ့ Battery သက်တန်း ဟာ သိသိသာသာ ကြာရှည်ခံလာ တယ်လို့သိရ ပါတယ်…ကြိုက်တဲ့ဘော်ဘော်တွေသုံးလိုက်နေ...
စုဆောင်းထားသော မြန်မာ ၀က်ဆိုဒ်များ ( အသုံးဝင်မှာပါ) စုဆောင်းထားသော မြန်မာ ၀က်ဆိုဒ်များ ( အသုံးဝင်မှာပါ) *1* *www.planet.com.mm* *(သတင်းလေးတွေစုံတယ်နော်)* *2.**www.people.c...
Phone Bill မကုန်အောင် အင်တာနက်အသုံးပြုမယ်
ကဲ အားလုံးပဲ ဒီတစ်ခါတော့ Facebook ထဲကကျွန်တော်ဘော်ဒါတစ်ယောက်ဆီကနေ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ အင်တာနက်ဖုန်းသုံးနည်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သိထားရမှာ...
HTC ဖုန်းမျာ Root မလုပ်ပဲ Myanmar Font ထည့်မယ်
ကျွန်တော် ဒီနည်းနဲ. HTC Sensation XE, HTC Desire HD နဲ. HTC ONE X မှာ စမ်းလုပ်ခဲ့တယ်။ အားလုံးက Android Version 4.0.3 မှာအဆင်ပြေကြတယ်။...
ကွန်ပြူတာ Speed မြှင့်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပြူတာကို နဲနဲဖြစ်ဖြစ် ပိုမြန်သွားအောင် Speed မြှင့်ကြည့်ရ အောင်ဗျာ။ ဒီအတိုင်း ထိုင်နေမဲ့အစား မိမိစ...
widget @ surfing-waves.com ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ချင်ရင်
Photo SharingGoogle Chrome Homepage BackgroundsFirefox Homepage Themes
3D ပြုလုပ်ဖန်တီးသော Blender: 3D content creation suite
By Blogspot tutorial / +Get This! ရခိုင်အလံ
facebook like လုပ်ပြီးအားပေးကြပါမိတ်ဆွေ
ကျွန်တော်ဘလော့ကို လာကြည့်သူအပေါင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်ပါ၊
ကိုယ်ကလည်းသင် တပါးသူကို ဝေကာမျှ
ကိုယ်မသိပေမယ့် သူသိနိုင်စေဖို့ ကိုယ်လို လူအ သူမဖြစ်ဖို့
ကိုယ့်အတွက်ထက် သူတပါးတွေပိုရစေဖို့ ကျနော် မတတ်ပေမယ့်
ဒီကိုယ်ခန္ဓာနှင့် တံတားထိုးပေးပါရစေ ...
ကျွန်တော့် နေရာလေးကိုရောက်လာကြသူ သူငယ်ချင်းအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ . ..
Android ဖုန်းကနေ ဂီတာတီးသင်ဖို့ ဂီတာ နဲ့လျှပ်စစ်...
android ဖုန်း အတွက်တရုတ် စကားပြော
အင်တာနက် သုံးသူတွေအတွက် Malware လေးနဲ့ရှင်းကြမယ်
photoshop နဲ့ကောင်မလေးကျောကို ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးကြည...
ကွန်ပျုတာတွေကို အဝေးထိန်းစနစ်နဲ့ ပြင်မယ့် TEAM VIE...
android ဖုန်းတွေမှာ မွန်ဖောင့်သုံးချင်သူတွေအတွက်
facebook မှာတင်ထားတဲ့ video တွေကို ဒေါင်းလော့ယူချင...
ကွန်ပျူတာထဲက file တွေကို သော့ခတ်သိမ်းကြမယ်
ဖုန်း password မေ့လို့ ဖွင့်မရဖြစ်နေလား
Moborobo PC Suite တဲ့ .
Window7Password မေ့နေရင် ပြန်ချိန်းပေးမယ့်နည်း။
Windows7ကနေ Wifi ပြန်လွှင့်နည်း
Window7Genuine Black Screen ပြသနာကို Softwareမသံ...
Windows7Personalize ပြဿနာ ဖြေရှင်းခြင်း
Windows XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀)
8 MB ပဲ ရှိတဲ့ Window 8 (Highly Compressed)
ဆော့ဝဲလ်မသုံးပဲ Wifi Hotspot တစ်ခု Windows 8 မှာ က...
window မှာ နာမည်နဲ့ အချက်လက်တွေကို လိုသလိုပြောင်းန...
Power မလာတဲ့ Computer တစ်လုံးအတွက်
Gmail ကို Backup အကောင့်ပြုလုပ်ခြင်း
Windows အတွက်အရေးပါပြီးသိထားသင့်တဲ့ Services များ
Firefox , Chrome , Gtalk မှာမြန်မာစာဖောင့်နှင့်ပတ်...
Mozallia Firefox browser ရဲ့ Speed မြင့်ချင်တယ်ဆို...
Windows 8 မှာ Start Menu button လေးထားသုံးချင်တယ်ဆ...
Windows 8 မှာပိတ်ထားတဲ့ Administrator Account ပြန်...
PC ရဲ့ Performance ကိုဘယ်လိုမြင့်ကြမလဲ မိမိသုံးနေတ...
Windows မတက်ပဲ BOOTMGR Missing error ဖြစ်နေရင်
Windows 8 ကို Clean install ပြုလုပ်ခြင်း
1500 တန် mectel ငွေဖြည့်ကဒ်သုံး CDMA 800 MHz လိုင်...
Wifi ကို Lock ချမယ်
Facebook က Video တွေကို IDM နဲ့ ဒေါင်းမရရင်.... ဒီ...
Facebookရဲ့ Password မေ့သွားလို့ ပြန်တောင်းချင်ရင်...
ဖုန်းတွင်းအသုံးပြု၇န် အသင့်သုံး မြန်မာစာဖောင်.
PC ကနေ Mobile ကို ဖုန်းအလကားခေါ်ဖို့ Viber ကို PC မ...
ထူးထူးခြားခြား Android App များ
ဘာလဲဟ ....Custom ROM ?
Free Ringtone Maker 2.4.0.888 + Portable | 1.16/1....
huawei 9500 ကို version မြှင့်မယ်
အက်တာနက်လိုင်းမရှိဘဲ Ytalk သုံးနည်း
iphone မှာ android install လုပ်နည်း
အရမ်းမြန်ပြီး ဒီဇိုင်းလန်းတဲ့ Android browser အသစ်...
သင်ဆေးလိပ်သောက်တာကို တားပေးမယ့် app လေး
Facebook ကို မြန်မြန်လေးသုံးချင်သူများအတွက် AKP fa...
3D Design နဲ့ window 8 theme Pro version လေး
Android ဟန်းဖုန်းများအတွက် လွန်စွာအသုံးတည့်မည့် မြ...
Zawgyi Flower Font with Keyboard (Install CWM) | ဖ...
ဖုန်းတစ်လုံးမှ တစ်လုံးသို့ ငွေဖြည့်ကဒ် လှမ်းထဲ့ပေး...
မြန်မာစာရေးတာ နှေးသူများအတွက် အလိုလိုရေးပေးမယ့် Ba...
Android ဖုန်းကို ဒီဇိုင်းလန်းလန်းလေးတွေ ပြောင်းသုံ...
Android ဖုန်မှာသုံးတဲ့အင်တာနက်လိုင်းကို မြန်နှုန်...
Android ဖုန်းကနေ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ချင်ရင်သုံးဖို့V...
Android ဖုန်းဒီဇိုင်းကို လန်းလန်းလေး ပြောင်းသုံးဖိ...
Android ဖုန်;မှာ Window7ပုံစံမျိုး ဒီဇိုင်းပြောင...
Android ဖုန်းမှာဆော့ဖို့သရဲတွေကို ကားနဲ့ တိုက်ရမ...
Android ဖုန်းအတွက် ဇယ်တောက်ဖို့Carrom 3D Pro .ap...
Android ဖုန်းအတွက် ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရေး ၈ိမ်း Metal g...
Android ဖုန်းမှာ ပြိုင်ကားမောင်းချင်သူများအတွက် Cr...
Android ဖုန်းအတွက် လက်နက်မဲ့ ဖိုက်တင်ဂိမ်း အလန်းဇယ...
Android ဖုန်းအတွက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့တင့်ကားဂိ...
Android ဖုန်းအတွက် ဆော့လို့ အရမ်းကောင်းမယ် Death W...
Android ဖုန်းမှာ ဆော့လို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ လူသားစားင...
Android ဖုန်းမှာ ဆိုင်ကယ်အမောင်းပြိုင်ချင်သူများအတ...
Android ဖုန်းအတွက် အသစ်ထွက်လာတဲ့ Frozen Keyboard P...
Photoshop ကို ၀ါသနာပါသူများအတွက် ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်း...
Photoshop လေ့လာလိုသူများအတွက် CS-4 အသုံးပြုနည်းအသေ...
Photoshop လေ့လာလိုသူများအတွက် CS-5 အသုံးပြုနည်းအသေ...
Window XP Service Pack2(32-bit) .iso Free Downlo...
Corel Paintshop Pro x5 Sp2 v15.2 Full with Keygen ...
Nero Platinum 12 full with patch
Rangeplus Wireless Network USB Adaptor (wusb100 V2...
Uniblue Driver Scanner 2013 latest Full Version Fr...
root လုပ်ထားပြီး ဖုန်းကို unroot လုပ်မယ်
Microsoft office 2010 / 2013 Professional Plus ful...
စက်တွေ လေးနေတာ ကို အလွယ်ရှင်းမယ်
Wondershare Video Converter Ultimate 6.0.1 full fr...
Format factory ver3video/audio/picture converter...
Window 8 Start Menu ကို Style ပြောင်းမယ် ( Start8 ...
Window 8 Pro Activator Final & Pro Key
Windows 8 Gadget Pack Free Download
Windows 8 မှာ BIOS ထဲဝင်နည်း
Android Phone (သို့) Tablet တွေကိုဘယ်လို Factory R...
Android ဖုန်းသို့ Zawgyi Font သွင်းနည်း
PC connections for Samsung Galaxy Y and some Usefu...
အင်တာနက်ခိုးသုံးရတဲ့ အလုပ်သမားများနဲ့အသုံးချလိုသ...
Samsung Galaxy S4 root (GT-i9500)
Android Device တွေမှာ Video Editing လုပ်နိုင်တဲ့ A...
Powered By Blogger widget | ဘာတွေကိုရှာနေတာလဲ
Top Downloads Mozilla Firefox
Share on Facebook Share on Twitter Share on StumbleUpon Share on Delicious Share on Digg Bookmark on Google Receive Email Updates Share
Link 1 Link2Link3Link4Link5Link6Link7Blogroll
widget @ surfing-waves.com Photo SharingGoogle Chrome HomepagesFree Games
Logo Design by FlamingText.com"/>
Logo Design by FlamingText.com" />
widget @ surfing-waves.com Pages - Menu